भारत-पाकिस्तान विभाजनको ७४ वर्षपछि दाजुभाईको पुनर्मिलन !
काठमाडौँ । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको थियो । तर, स्वतन्त्रतसँगै भारतको विभाजनले ठूलो मूल्य चुकाएको थियो ।
भारतीय उपमहाद्धीप दुई ओटा स्वतन्त्र क्षेत्र- भारत र पाकिस्तानको रुपमा विभाजित भएको थियो । विभाजनसँगै हिंसा र नरसंहार पनि मच्चिएको थियो । विभाजनको घाउ अझै पनि दुबै देशमा देखिन्छ ।
भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा दुई देशमा अलग भएका दुई दाजुभाई ७४ वर्षपछि एकजुट भएका छन् । पाकिस्तानी समाचार संस्था न्युज इन्टरनेसनलका अनुसार पाकिस्तानको फैसलाबादका सिद्दीकीले आफ्ना दाजु हाबिबलाई भेटेका छन् । सिद्दिकीले विभाजनपिछ भारतको पन्जाबको फुलनवाल क्षेत्रमा बस्दै आएका ८० वर्षीय हाबिबसँग भेट गरेका हुन् । हाबिब भाइलाई भेट्न कर्तापुर कोरिडर आएका थिए ।
लामो समयपछि मिलन हुँदा दुई दाजुभाई निकै भावुक बनेका थिए । एकले अर्कोलाई अंगालो हालेर आँशु चुहाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भारत विभाजन हुँदा सिद्दिकी बच्चा नै थिए ।
फैसलाबाद जिल्लाको बाहिरी भागमा रहेको फुगारन गाउँका बासिन्दा सिद्दिकीले दुई वर्षअघि क्यानडाका सिख समाजसेवीसँग सम्पर्क गरेको बताए । उनले समाजसेवीले दुई दाजुभाइलाई मिलाउन सहयोग गरेको बताए ।
अरू धेरैजस्तै उनीहरूले पनि एकअर्कालाई अहिलेसम्म मरेको ठानेका थिए र सीमापार मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्ने समूहको कारणले मात्र यो भेट सम्भव भएको थियो । दुई वर्ष पहिले एक अर्कालाई भेट्टाए तर महामारीको कारण एकताको लागि कुर्नुपरेको थियो ।
गण्डकीमा रोचक नतिजा- कतै १ भोट, कतै शून्य
पोखरा । नवलपुरको बौंदीकाली गाउँपालिकामा दुईजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले शून्य मत पाएका छन् । मधुकर नेपाली र कृष्णप्रसाद पराजुलीले १ मत पनि नपाएका हुन् । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमा प्रतिस्प्रर्धा गरेका एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार तारानाथ श्रीपालीले
हेटौंडाको रोचक प्रतिस्पर्धा, एकीकृत समाजवादी १ मतले अगाडी
हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा तीन पक्षीय प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै गएको छ । उपमहानगरपालिकाको ११ हजार ६७३ मत गनिसक्दा गठबन्धनबाट मेयरकी उम्मेदवार बनेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीनाकुमारी लामाले जम्मा १ मतको अग्रता
पृथ्वीमा डायनासोरको 'अन्तिम दिन' कस्तो थियो ?
काठमाडौँ । विश्वका धेरैजसो वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि डायनासोरहरू ६६० मिलियन वर्ष पहिले विशाल क्षुद्रग्रहको टक्कर पछि पृथ्वीबाट लोप भएका थिए । क्षुद्रग्रहको टक्कर स्थललाई आज मेक्सिकोको युकाटान प्रायद्वीप भनिन्छ ।
पाइलट बेहोस भएपछि यात्रुले विमानलाई सकुशल अवतरण गराएपछि...
काठमाडौँ । अमेरिकामा एउटा अनौठो घटना घटेको छ । उडिरहेको विमानमा पाइलट बेहोस भएपछि एक यात्रुले विमानलाई सकुशल अवतरण गराएका छन् । अचानक ट्राफिक कन्ट्रोललाई 'विमान कसरी रोक्ने थाहा छैन' भनेर